Iindaba-Kutheni ukhetha iiprofayili zealuminium zeshishini locingo lwesiko?
Uvavanyo olukhawulezayo lobugcisa kunye nekoteyishini ekhawulezayo. Wamkelekile ukubuza kwaye uxoxe ngenkqubo.
Iphrofayili ye-aluminium yoshishino
Ubushushu be-aluminium extrusion
Iphrofayili ye-aluminium ye-LED
Izixhobo zesakhelo sephrofayili yealuminium
Iphrofayili yeChassis aluminium kunye nebhokisi yeprofayile yealuminium
Izinto zokwakha iprofayili yealuminium
Iingcango zealuminium kunye neefestile
Aluminium udonga lomkhusane
IAluminiyam ingxubevange yezixhobo
I-aluminium ingxubevange ityhubhu ejikelezayo kunye netyhubhu yesikwere
CNC machining iindawo metal
Izixhobo ezingaqhelekanga zobhedu
Izixhobo zentsimbi ezingenasiphelo
Ezinye iintlobo zamalungu e-aluminium alloy
Ibhedi yeentyatyambo yeAluminiyam
Kutheni ukhetha iiprofayili zealuminium zeshishini locingo lwesiko?
Ngophuhliso lweThe Times, abavelisi abaninzi bezixhobo zorhwebo bayathanda ukuxhobisa izixhobo zabo kunye neerobhothi ecingweni, bedlala ukubekwa bucala ukukhusela ukusebenza kwesiqhelo koomatshini kunye nokhuseleko lwabasebenzi. Njani malunga ne-aluminium yemizi-mveliso yocingo lwesiko? Kufuneka ilungile! Kwaye kulungile! Ngenxa yokuba iprofayili ye-aluminium yemizi-mveliso inoluvo lwale mihla, ikwalula ngakumbi kwaye kulula ukuyisebenzisa, kwaye iimveliso ezixhasayo kulula ukuzihlanganisa. Ukongeza, iprofayili ye-aluminium ngokwayo inomsebenzi wokulwa ne-corrosion kunye ne-anti-rust kulula ukuyicoca. Apha ngezantsi siza kwazisa ngocingo lwealuminium, masiqonde izinto eziphathelene nocingo lwealuminium kunye neendlela zokulungisa, njalo njalo.
Isakhelo esiphambili socingo lwealuminium yemizi mveliso sihlala singama-4040 kunye nama-4080. Ngokwesiqhelo kwikona yekholamu, phezulu, kwindawo yoxinzelelo indawo eyomeleleyo yokusebenzisa iprofayile engama-4080. Iiprofayili zomgca oqhelekileyo zisesikwere, iimveliso ezigqityiweyo zenziwe nge-oxidized, umphezulu ugudile. Ngokukodwa emva kweshishini le-4.0, ngakumbi nangakumbi iindibano zocweyo zefektri zeshishini zifuna ukubiyelwa kweprofayili yealuminium ukuqinisekisa ukhuseleko lweeworkshops.
Ukusetyenziswa kweprofayili ye-aluminium yokucwangciswa kocingo olwenziweyo, indibano ilula kakhulu, icandelo loqhagamshelo lizinikezelweyo kunxibelelwano lwezincedisi. Sifuna ukuqhubekeka ngokuhambelana nemizobo eyenziweyo ngaphambili, imingxunya yokubetha kunye neengcingo zetephu, ezilungele ngakumbi ibandla. Umazantsi wocingo ikwalunyawo olukhethekileyo, olunokulungiswa okanye ukuhanjiswa. Kulula ngakumbi ukudibanisa kunye nezixhobo ezizodwa.
Ukongeza, ulwenziwo olwenziweyo lwe-aluminium yocingo lokukhetha izinto, zihlala zenziwe nge-acrylic, ukukhanya okukhuselekileyo, ibhodi yedangatye edibeneyo, iplexiglass njalo njalo. Abanye abathengi baya kukhetha iigridi ezimnyama ezingama-40 ukuya kwezingama-40. Xa usebenzisa ezi zinto zincedisayo, kuya kufuneka uzifake kwislot ebekelwe iprofayili, ekulula kakhulu kunxibelelwano olungenamthungo.
Ixesha Post: Nov-02-2020